Maxay tahay arrinta uu Cabdikariin Guuleed sheegay in Farmaajo uu ka baqayo? - Caasimada Online
Home Warar Maxay tahay arrinta uu Cabdikariin Guuleed sheegay in Farmaajo uu ka baqayo?
Maxay tahay arrinta uu Cabdikariin Guuleed sheegay in Farmaajo uu ka baqayo?
Muqdisho (Caasimada Online) – Musharrax madaxweyne, Cabdikariin Xuseen Guuleed oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa waxa uu kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan caqabadaha hortaagan hirgelinta doorashooyinka dalka ee 2021-ka.
Cabdikariin Xuseen Guleed ayaa sidoo kale intaasi sii raaciyey “Farmaajo wuxuu ka baqayaa in uu doorasho galo,”.